I-Gyöngy Apartman Keszthely - I-Airbnb
I-Gyöngy Apartman Keszthely
Indawo yam ikufutshane nezithuthi zikawonke-wonke, iivenkile zokutyela kunye nezinto ezinokwenziwa yintsapho. Uza kuyithanda indawo yam ngenxa yombono nendawo ekuyo. Indawo yam ilungele abantu abathandanayo neentsapho (ezinabantwana).
Iflethi okanye indlu ekwicomplex ekwicomplex ekwicomplex, ekwicomplex nenendawo entle yaseHévíz ilindele abo bafuna ukuphumla unyaka wonke kwindawo ethe cwaka esedolophini. Singakwazi ukwamkela abantu abayi-1 ukuya kwabayi-4 kwiflethi ekumgangatho ophezulu.
Iflethi yindlu yosapho esecaleni, ekwiimitha eziyi-50 kukho ikhitshi elinento yonke nelenziwe nge-mechanized (umatshini wokuhlamba izitya, ioveni, ifriji enefriji, i-micro), igumbi lokutyela evulekileyo, igumbi lokuhlambela eliyi-1 (umatshini wokuhlamba impahla), igumbi lokulala eliyi-1 elinendawo yokulala yabantu ababini negumbi lokuhlala (indawo yokubasa umlilo, iTV ye-flat-screen) elinesofa yabantu ababini.
Ityeya kunye neentyantyambo, igadi entle enezitulo ezikumgangatho ophezulu kunye nendawo yokupaka evaliweyo. I-WI-FI yasimahla iyafumaneka kuyo yonke le ndlu.
Iindawo ezikufutshane: Inqaba ejonge umnyhadala, Inqaba iRezi, indawo ehlala amaBuddha eSztupa, iReziben (iikhilomitha eziyi-6) ipaki ye-dino yabantwana, ipaki yokuzonwabisa phakathi kweHévíz-Keszthely (iikhilomitha eziyi-1).
Indawo yokuhlala ikwiikhilomitha eziyi-3 ukusuka eKeszthely naseHévíz.
Inombolo yomthetho: MA21006863
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Keszthely